Daryeelka Caafimaadka Qoyska - Ururka Daryeelka Bulshada Daryeelka Caafimaadka Qoyska - Ururka Daryeelka Bulshada
Adeegyada Daryeelka Caafimaadka Qoyska
Imtixaanada sanadlaha ah
Baaritaanka kansarka naasaha/gudbinta raajooyinka
Baaritaanka kansarka ilmo galeenka (pap smear)
Baaritaanka kansarka mindhicirka
Daryeelka haweenka ee bilaashka ah ama qiimaha jaban ee haweenka u qalma
Menopause waxbarashada iyo hanuuninta
Daryeelka isla maalinta ah arrimaha haweenka ama walaacyada sida dheecaanka siilka, xanuunka ama caadada aan joogtada ahayn / baaritaanka STI/baaritaanka HIV-ga degdega ah / baaritaanka uurka iyo xaqiijinta uurka (fadlan horay u soo wac)
Doorashooyinka xakameynta dhalmada, hagitaan, iyo badbaado
Qorshaynta uur caafimaad leh
Daryeelka dhalmada ka hor iyo dhalmada ka dib, oo ay ku jiraan daryeelka lammaanaha hooyada iyo dhallaanka ee bixiyahaaga dhalashada ka dib ugu yaraan bilaha ugu horreeya
Iskaashatada bulshada ee xanuunka isticmaalka opioid kahor, inta lagu jiro, iyo uurka kadib
Xannaanada ilmaha yar
Daryeelka qoyska aasaasiga ah ee dhammaan da'da & marxaladaha
Hubinta Ilmaha ee Wanaagsan
Maareynta cudurada daba dheeraada
Daryeelka dadka cusub
Daryeelka bulshada ee cad
LGBTQ+ daryeelka bulshada & daaweynta hormoonka xaqiijinta jinsiga
Gelitaanka farmashiyaha ee goobta
The Farmashiyaha Daryeelka Bulshada ee Ururka waxay ku taal gudaha goobtayada caafimaadka Lubnaan
The Farmashiyaha Medicine Shoppe Waxay ku taal gudaha goobtayada Koonfur-bari Lancaster
Rugaha talaalka (Jadwalka tallaalka 2022)
La-talin caafimaad, waxbarasho, iyo hagitaan
U gudbinta daryeelka caafimaadka gaarka ah
Meesha aad aado markaad ubaahantahay daryeel
Ogaanshaha meesha aad daryeelka u aadi karto waxay wax ka bedeli kartaa inta aad bixinayso, inta aad sugayso, iyo daryeelka iyo daawaynta aad hesho. Kharashka daryeelka iyo daawaynta waxay ku salaysan yihiin nooca xarunta daryeelka caafimaadka ee aad tagto - kaliya maaha dhaawacaaga ama jirada. Bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah ayaa badiyaa ahaan doona doorashada ugu jaban. Waxa ku xiga daryeelka degdegga ah. Qolka degdega ahi waa doorashada ugu qaalisan ee daryeelka iyo daawaynta.
Bixiyaha Daryeelka Aasaasiga ah / Dhakhtarka Carruurta ($)
Wicitaankaagii ugu horreeyay ee daryeel markaad ballan samaysan karto maalintii.
Waxa ugu fiican baadhista fayoobaanta, tallaalada, xaaladaha daba-dheeraada, jirada, iyo walaacyada iyo arrimaha kale ee aan degdega ahayn. Haddii aad la kulanto arrin caafimaad oo degdeg ah marka xafiisku xiran yahay, wac 717-299-6371 si aad ula hadasho bixiyaha wicida kaas oo ku siin kara talo caafimaad taleefoonka.
Daryeelka Degdega ah ($ $)
Waxa ugu fiican welwelka aan nafta halis gelinayn & arrimaha marka daryeel bixiyahaaga aasaasiga ah la waayo.
Badanaa inta lagu jiro fiidkii iyo saacadaha fasaxa.
Qolka Gurmadka ($$$)
Waxaa loo heli karaa 24/7 xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka sida xabad xanuun, neefsashada oo dhib ah, nabarrada waaweyn, ama lafaha jaban.